देउवाको पालो सकियो, अब म सभापती बन्छु – कोइराला « Deshko News
देउवाको पालो सकियो, अब म सभापती बन्छु – कोइराला
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक द्धन्द्ध र विवाद समाधान गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय जिल्ला सभापतिहरुले सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध भेला नै गरे । विशेष महाधिवेशनको मागसमेत गर्न थालेपछि देउवा रुष्ट बनेका छन् । विशेष महाधिवेशनको कुरा किन उठ्यो ? देउवाको कमजोरी के हो ? कांग्रेसभित्रको विवादलगायतका विषयमा उनै डा. शशांक कोइरालासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ अबको क्रममा:–
नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको चर्चा किन भयो ? अहिले यसको आवश्यकता हो र ?
महासमिति बैठकमा पटक पटक अरक्षण सुविधा नदिने कुरा उठेको थियो । अर्को कुरा केन्द्रिय सदस्य तलबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने धारणा आएको थियो । यो विषलाई महासमितिले पारित नगरी सभापतिलाई जिम्मा दिनुभयो । तर सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमितिको भावनाविपरित निर्णय गर्नुभयो । यही दुईवटा मुद्धाका कारण जिल्ला सभापतिहरुको भेला भएको हो ।
तर सभापति देउवाले त जे सुकै गर म चुनौति समाना गर्न तयार छु भनेर अडान लिनुभएको छ नि ?
हो, उहाँले फेस गर्छु भन्नुभएको छ । तर विशेष महाधिवेशनभन्दा पनि मूल विषयलाई सभापतिले गम्भीर भएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा राम्रो नतिजा आउँदैन ।
जिल्ला सभापतिहरुले भनेजस्तो केन्द्रिय समितिले गरेको महासमिति सदस्यहरुको भावनाविपरितको निर्णय उल्टिएन भने के हुन्छ ?
मेरो धारणा भनेको सभापति देउवालाई जिल्ला सभापतिहरुले भने जस्तै केन्द्रिय समितिको निर्णय उल्ट्याउनुपर्छ । अर्को कुरा भनेको समयमा नै अधिवेशन हुनुपर्छ । अधिवेशन समयमा भएन भने आगामी निर्वाचन प्रभावित हुन्छ । चुनावलाई लक्षित गरेर हामी एकतावद्ध हुनु जरुरी छ । तर पहिलो शर्तमा भनेजस्तो केन्द्रिय समितिको बहुमतले गरेको निर्णय उल्टिएन भने विशेष महाधिवेशनमा नै जानुपर्छ । अर्को विकल्प छैन ।
विशेष अधिवेशनले कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ ?
विशेष अधिवेशन भनेको त कांग्रेसका लागि खतरा हो । विशेष महाधिवेशन भयो भने कांग्रेस फुट्छ र समाप्त भएर जान्छ । त्यसैले कांग्रेसलाई बचाउनका लागि सभापति देउवाले केन्द्रिय समितिको निर्णय उल्ट्याउनुपर्छ ।
अबको महाधिवेशनमा देउवालाई सभापति बन्न नदिने तपाईहरुको अभियान हो ?
त्यसरी नभनौँ । तर नेता कार्यकर्ताहरुले परिवर्तन खोजेका छन् । नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा मेरो पनि हो । अब पुरानो नेतृत्वलाई स्वीकार्दैनन् भन्ने लागेको छ ।
अब तपाईहरुको गुटबाट सभापति बन्ने सम्भावना कति छ ?
हाम्रो पक्षका साथीहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउनुपर्छ । हामीमध्ये नै नेतृत्वका लागि २–३ जना उठ्यौँ भने त देउवालाई नै फाइदा हुन्छ । त्यसैले हामीबीचमा एकताको खाँचो छ ।
सभापतिका लागि तपाई आफैँ पनि अघि सर्ने तयारीमा हो ?
तपाईले मलाई अप्ठ्यारो प्रश्न गरिदिनुभयो । मेरो उम्मेदवारी त जब हुन्छ तब पार्टीलाई एकतावद्ध गराउन सक्छु । मैले पहिला पनि भने, हाम्रो पक्षबाट एक जना नै उम्मेदवार हुने हो । अर्कोतिर देउवाजीले आफै छोडिदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना हो । त्यसो भएन भने देउवा र हामीबीचबाट एक जना उम्मेदवार हुन्छन् । आवश्यकता पर्यो भने म आफैँ पनि अघि सर्छु ।
यी हुन् श्रीमान श्रीमतीले कहिले अरुसँग गर्न नहुने कुराहरु ?
काठमाडौं श्रीमान् श्रीमती एकै रथका दुई पांग्रा हुन् । रथको एक पांग्रा विग्रिए वा नभए
काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउन तयारी अघि बढ्यो
काठमाडौं । सरकारले संघीय राजधानीमा मेट्रो रेल्वे निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)तयार पार्न कम्पनी
आज २०७६ साउन ५ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस्
वि.सं.२०७६ साल साउन ०५ गते । आइतबार । इस्वी सन् २०१९ जुलाई २१ तारिख ।
ओली–गौतम नजिकिँदै, भयो यस्तो सहमति
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वामदेव गौतमको